MAXAAD KALA SOCOTAA DHAXAL SUGEYASHII EERSADAY DHALIISHA BOQORTOOYADA SACUUDIGA? | Maalmahanews
“Markii ay maalintaasi saacaduhu is gurayeen islamarkana aan wax war ah laga hayn ayaa talo nagu cadaatay,ma aanan la hadli Karin kooxda ammaanka waana taa midii ugu horaysay ee digniinta baraaruga” bixisay ayuu yiri.
“Waxaa yimid Hotelka safiirka Sacuuduga ee Switzerland waxaana la socday maamulaha hotelka waxa ayna qof waliba u sheegeen in ay hotelka baneeyaan ayna dibada u baxaan,”ayuu yiri Ferreira.
Dhaxal suge Turki bin Bandar oo la kulmaya wasiirka maaliyada ee Pakistann 2003
“Qof waliba waxa uu doonayaa in aad dib u soo laabato ,alle ha ku sharfee,” ayuu yiri wasiir ku xigeenka.
“waxa ay doonayaan in aan dib u soo laabmo?”ayuu ku jawaabay Turki. “maxay yihiin warqadaha ay ii soo dirayaan saraakiishiina oo ay leeyihiin sidii Sultan binu Turki oo kale Ayaan kuu jiidaynaa oo Sacuudiga dib kuugu celinaynaa?.
Wasiir ku xigeenka ay ka dib ku jawaabay”kuma taabanayaan aniga ayaa walaalkaa ah.”
“Bil waliba ama labadii bilood mar ayuu I soo wici jiray ayuu yiri saaxibkii Wael al-Khalaf oo ah nin wax ku qora baraha internetka.
“Ka dib waxa aan wayay 4 ilaa ilaa 5 bilood waana shakiyay ka dib waxa aan ka maqlay sargaal sare oo boqortooyada ka tirsan in Turki bin Bandar uu iyaga gacanta ugu jiro .”
LAMA DEGAANKA CARBEED
“Diyaarad gaar ah ayaa timid oo qaaday dhaxal suge Saud balse kuma aysan dagin Roma waxa ay ka dagtay Riyadh,”ayuu yiri Khalid.
Dhaxal suge Khaled